Video स्वास्थ्य/जीवनशैली | April 14, 2018 | sam dahal
किन टोक्छ सर्पले
हुन त सर्पलाई हेरेर विषालु वा विष नलाग्ने भनेर छुट्याउन गाह्रो हुन्छ । विषालु सर्पको मुखमा दुईवटा फ्याक (भाँचिएको भए एउटा, त्यो पनि नहुन सक्छ) तथा कत्ला पेटको एक छेऊदेखि अर्को छेऊसम्म हुन्छ । टाउकोको कत्ला सानो तर धेरै हुन्छ । तर सर्प हेरेरै भने ढुक्क हुनुुहुदैन । विषालु सर्पको विष तीन प्रकारको हुन्छ ।
सर्पले टोकेमा देखिने संकेत टोक्ने सम्पूर्ण सर्प विषालु हुँदैनन् । ८० प्रतिशत सर्पहरूको टोकाई विष नलाग्ने खालको हुने गरेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । तर सर्पले टोकेमा मान्छे आत्तिने गर्छन् । यसले उनीहरूमा तनाव सृजना भई हृदयाघात हुन्छ र त्यसैकारणले पनि मृत्यु हुने गरेको छ ।
1. दुईवटा फ्याक (डसेको चिन्ह) हुन्छ ।
4. रगत बग्न सक्छ
5. फोका आउन सक्छ
6. टोकेको क्षेत्रका लिम्फनोड बढ्न सक्छ ।
7. ढिलो भएमा पाक्ने, संक्रमित हुने र तन्तुहरू मरेर जाने हुनसक्छ ।
Previous Postस्वस्थ तन र मनका लागि गहिरो निद्रा अपरिहार्य, गहिरो निद्राका लागि यसो गर्नुहोस्Next Postनेपालि खाना ढिँडो